IZIBONELELO ZELACTIC ACID SKIN -UYISEBENZISA NJANI I-LACTIC ACID YOLUSU OLUTHAMBILEYO - UKHATHALELO LOLUSU
I-Lactic Acid yi-Gentle AHA Iimfuno zakho zoLusu rhoqo, ngokweDermatologist
Eyona / Ukhathalelo Lolusu
Nokuba ngaba i-serum yesilika okanye cream obutofotofo , azinasiphelo iimveliso ezichasene nokwaluphala ukufuna ingqalelo yakho. Ukusuka ukujonga kwakhona ukuya ivithamin C kwii-peptides, izithako zenza wonke umahluko kwaye zikhona intabalala ukukhetha kwi. Kodwa kutshanje, usenokuba uqaphele enye elwela indawo yeshelufu: i-lactic acid.
I-Lactic acid yi-alpha hydroxy acid (AHA), iklasi yeekhemikhali ezinobunono ukukhupha ulusu , ezibandakanya i-glycolic, i-citric, i-tartaric, i-mandelic kunye ne-malic acid.
Kodwa ngelixa ivela kwiimveliso ezininzi, i-lactic acid ayisiyonto intsha kwaye inembali eyahlukileyo. Isithako saqala sahlukaniswa nobisi olumuncu, kwaye kunjalo Ndacinga ukuba uCleopatra uthathe ithuba yeempawu zayo eziluncedo kulusu ngokuhlamba ubisi, utsho S. Tyler Hollmig, MD , Umlawuli wotyando lwesikhumba kwi-UT Dell Medical School kunye ne-Ascension Seton e-Austin.
Kule mihla, i-asidi ye-lactic ivela kwimithombo eyahlukeneyo, kubandakanya ne-vegan, eqhelekileyo eyenziwayo kwaye kulula ukuyila imveliso epheleleyo ngayo. Xa kuthelekiswa nomzala wakhe onamandla amakhulu, glycolic acid , I-lactic acid inamandla (enkosi kubukhulu bayo obuncinci bemolekyuli) ngelixa ihambisa iziphumo ezifanayo, oko kuthetha ukuba inokuba ilunge ngakumbi kwabo banolusu olucaphukisa ngokulula, utshilo uGqirha Hollmig. Ngaba unomdla? Funda ukuze ufumanise ukuba yeyiphi i-lactic acid enokuyenza kulusu lwakho.
Zeziphi izibonelelo zolusu lwe-lactic acid?
Yinto exfoliator top-inotshi.
I-Lactic acid isebenza ngokucoca ngobunono ulusu lwakho lwangaphandle, ucacisa uGqirha Hollmig. Ukukhupha iiseli ezimdaka, ezifileyo zenza indlela yokuqaqamba, ukuqaqamba ngaphantsi, uphando ibonisa.
Ingaba luncedo ekunciphiseni i-acne.
Oku kukhutshwa kwakhona kunceda ukugcina ii-pores zicacile ngokucoca iiseli zesikhumba ezifile kunye neoyile egqithisileyo, ukuthintela amaqhakuva, ama-blackheads, okanye i-whiteheads ekubeni yenze.
Inokukunceda ukuhambisa imigca ecolekileyo kunye nemibimbi.
Rhoqo, isikhumba esigugileyo sinokusebenzisa ngakumbi uncedo kwisebe lokukhutshwa komzimba. Ngesiqhelo, iiseli zolusu ezisempilweni kumaleko ongaphandle kwesikhumba ziphalaza rhoqo kwiiveki ezimbini ukuya kwezintathu. Oku kunokucothisa ngenxa yokuguga, ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni, kunye nezinye izinto ezixinzelela imeko yendalo, ezinokubonakala ngathi zirhabaxa, zinamaxolo, kwaye zinolusu olubonakala luzolile, utshilo uGqirha Hollmig.
Ukongeza ekuvuseleleni ukukhanya kwakho, i-lactic acid inokunyusa ukutyeba. Uphando oludlulileyo lubonisa ukuba ifomula ye-lactic acid eyi-5% isetyenziswe kabini ngemini ukuphucula ulusu kunye nokuqina, utshilo uGqirha Hollmig, oguqula ukuba ibe lula imigca kunye nemibimbi. Oku kudala, kodwa kudla ngokukhankanywa ukufunda ubonise ukuba uxinzelelo olukhulu lwe-12% lubangele izibonelelo ezibonakalayo ngakumbi, kodwa uyalumkisa ukuba iimveliso ezinamandla zinokukwenza ukuba uthambekele ekucaphukeni (njengobomvu, ukurhawuzelela, okanye ukucola), ngakumbi ubunzima obunobunzima.
Inokunyanga ulusu olunamaqhuma.
Ngaphandle kobuso, i-lactic acid ihlala ifakwa kuyo into yokuthambisa umzimba . Eyona nto iqaphelekayo, isetyenziselwa ukunyanga i-keratosis pilaris, amaqhuma enkukhu abonakala emqolo weengalo zakho okanye emilenzeni. Inkqubo ye- imeko yesikhumba ayinabungozi , kodwa ihlala ikhathaza. I-Lactic acid inokukhathalela la maqhuma mncinci, utshilo uGqirha Hollmig, kodwa kuya kufuneka uthambise into yokuthambisa rhoqo ixesha elide kwiziphumo ezilungileyo.
Ngaba kukho naziphi na iziphumo ezibi zokusebenzisa i-lactic acid kulusu lwakho?
I-Lactic acid yaziwa ngokuba mnene kwaye ihambisa amanzi ngakumbi xa kuthelekiswa nezinye ii-AHAs. Ngeso sizathu, inokulunga nokuba unayo ulusu olubuthathaka , utsho uGqirha Hollmig. Oko kwathiwa, ukuba ufumanisa ukuba isithako sikwenza ube bomvu kwaye ucaphuke, cinga ukusebenzisa imveliso enepesenti esezantsi ye-lactic acid okanye uyiyeke ngokupheleleyo.
Inqaku elibalulekileyo: Kuba zonke ii-AHA zinokwenza ulusu lwakho lubuthathaka ngakumbi elangeni, soloko ugcoba i-sunscreen ngaphambi kokuba uphume ngaphandle, nokuba ufake i-lactic acid ngaloo ntsasa okanye ngobusuku bangaphambili.
Ukuba ukhulelwe, i-lactic acid yinto ekhuselekileyo, utshilo uGqirha Hollmig. Ugqirha wesikhumba sakho kunye ne-OB / GYN iya kuphakamisa ukutsiba izinto ezidumileyo zokulwa ukuguga, njenge Ii-retinoids , ngoko i-acid ye-lactic inokuthi ithathe indawo efanelekileyo ngeli xesha.
Ungayongeza njani i-lactic acid kwinkqubo yakho yokunakekelwa kwesikhumba
Qalisa kancinci: Soloko ulandela imiyalelo yemveliso, kodwa kungcono uqale kancinci ngeacids kwaye wakhe ukunyamezelana. Xa ungathandabuzeki, sebenzisa imveliso esezantsi (ejikeleze i-5%) amaxesha ambalwa ngeveki, usebenza ngendlela yakho ukuya kuyo yonke eminye imihla kuxhomekeke kwimpendulo yolusu lwakho.
✔️ Vavanya oku: Ngaphambi kokuba usebenzise imveliso yeasidi ye-lactic, yenza uvavanyo lwesizixa kwinxalenye engaphakathi yengqiniba yakho okanye ngezantsi nje kwesilevu sakho ukubona ukuba unayo nayiphi na indlela yokuphendula. Ukuba ufumana naluphi na ucaphukiso olugqithisileyo, yeka ukusebenzisa okanye uthethe nedermatologist yakho kumanyathelo alandelayo.
Fumana imveliso yeqhawe lakho: I-Lactic acid inokufumaneka kwiintlobo ngeentlobo zeemveliso zokhathalelo lolusu, kubandakanya oku kulandelayo:
Abahlambululi: Ilungile kulusu oluqhelene namabala, a ukuhlamba ubuso iqulethe i-lactic acid yindlela entle yokufumana izibonelelo zesithako ngaphandle kwexesha elininzi kulusu lwakho, ukunciphisa ukubakho kokucaphuka. Qiniseka ukuba uyayiphepha indawo ejikeleze amehlo akho.
Iikhrim okanye into yokuthambisa: Iikhrimu kunye nezinto zokuthambisa ziyindlela elungileyo yokwazisa i-lactic acid kwindlela yakho yesiqhelo kuba zihlala zenziwe ngezithako zokuthambisa ezinje ngeekeramide kunye hyaluronic acid , ukunciphisa ukomelela okunokubakho.
Iserum: Iiserum zihlala zihambisa umpu onamandla ngakumbi wezithako ezisebenzayo kulusu. Kungcono ukusebenzisa ezi zinto ebusuku emva kokucoca nangaphambi kokuthambisa.
Iimaski: Ezi mveliso zenzelwe ukunika ukubetha okukhawulezayo kokukhutshwa, oko kuthetha ukuba uxinzelelo lwe-asidi ye-lactic kunye nezinye izithako ezinamandla zinokuphakama. Ngokubanzi, iingcali zincoma ukusebenzisa imaski enje kanye ngeveki okanye njengoko kufuneka.
CLEANER AHA / BHA Ukucoca ukucocekaUMurad sephora.com$ 42.00 THENGA NGOKU
Idibanisa i-salicylic, i-lactic, kunye ne-glycolic acid
Ioyile elungileyo yesikhumba esirhawuzayo
I-SERUM Lactic Acid 10% + HAEziqhelekileyo sephora.com$ 6.80 THENGA NGOKU
Idibanisa i-lactic kunye ne-hyaluronic acid
ILOTION SA iLotion yoLusu oluMdaka kunye noLusu oluBumvuCerava amazon.com $ 30.38$ 25.99 (14% icinyiwe) THENGA NGOKU
Idibanisa i-salicylic kunye ne-lactic acid
FACE MASK Glycol Lactic Radiance yokuhlaziya iMaskREN Ucoceko lolusu sephora.com$ 76.00 THENGA NGOKU
Idibanisa i-glycolic kunye ne-lactic acid
Kulumkele ukuxuba: Ngaphandle kokuba imveliso yenziwe ngokukodwa ngeeacidi ezininzi (ezinjengezi zikhankanywe apha ngasentla), kunqande ukudibanisa imveliso yeasidi ye-lactic nenye imveliso enee-AHAs, ii-BHAs, okanye i-retinol ngaxeshanye nesicelo ukunqanda ukoma okugqithileyo.
Musa ukulibala i-sunscreen: Kwakhona, soloko usebenzisa i-SPF kusasa ukuba usebenzisa imveliso ye-lactic acid phezolo. Oku kunokunceda ukukhusela ulusu olutsha, olusempilweni kumonakalo we-UV. ( Jonga ubuso bethu obuthandayo elangeni kulusu ngalunye. )
Inyama efriziwe ilungile de kube nini?
i-flip flops ngenkxaso efanelekileyo ye-arch
Ngaba i-covid-19 inokuchaphazela iindlebe zakho
sesiphi esona sidiliya sokutshintshwa kukutya